🥇 ▷ SHARCIYADA LEGO STAR WARSKA SHAQADA LAGU SAMEEYO ✅
SHARCIYADA LEGO STAR WARSKA SHAQADA LAGU SAMEEYO
LEGO STAR WARS BAARLAMAANKA ayaa lagu dhawaaqay. Warner Bros. Interactive Entertainment LEGO Group iyo Lucasfilm waxay ku dhawaaqaan QARSAMADA LEGO STAR WARS. Aruuriyaan, dhisaan oo la dagaallama ciyaarta istaraatiijiyadda cusub ee mobilada ee ku daraya jilayaasha LEGO Star Wars iyo gawaarida ciyaarta 1-on-1 ah waqtiga dhabta ah.
Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO Group iyo Lucasfilm ayaa soo bandhigay LEGO® Dagaaladii Xiddigaha™ Dagaallada, ficil cusub iyo ciyaar istaraatiijiyadeed oo loogu talagalay khaaska ah aaladaha moobiilka ee isku daraya jilayaasha LEGO® halyeeyada, goobaha iyo gawaaridaDagaaladii XiddigahaPla la-dagaalo badan 1-on-1 dagaal waqtiga dhabta ah.
Waxaa soo saaray TT Games Brighton waxaana daabacay Warner Bros. Interactive Entertainment iyo Playdemic, LEGO Dagaaladii Xiddigaha Dagaallada ayaa u oggolaanaya ciyaartoydu inay isku daraan jilayaasha iyo baabuurta dhammaan baroortii galashiyada ay doorteen Dagaaladii Xiddigaha in la abuuro qalbi jab xoog leh oo dhinaca iftiinka ah ama dhinaca mugdi ah oo lagula dagaallamo cayaaraha tooska ah iyo tartamada. Iyada oo loo adeegsanayo kantaroolka taabashada ee dareenka leh, ciyaartoydu waxay geyn doonaan ciidammo waxayna dhisi doonaan munaarado LEGO oo ku yaal goobta dagaalka si ay u difaacaan ugana helaan dhul isku dayaan inay burburiyaan saldhigga kuwa ka soo horjeedda.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaanu balaarinay dhaxalka filimka ‘LEGO videogame saga’ Dagaaladii Xiddigaha la LEGO Dagaaladii Xiddigaha Dagaallada, waa waayo-aragnimo cusub oo loo abuuray aaladda mobilada, ”ayuu yidhi Jason Avent, oo ah agaasimaha TT Games Brighton istuudiyaha. “Waxaan rajeyneynaa inay ciyaartoygu ku raaxeysan karaan isku darka gaarka ah ee LEGO Dagaaladii Xiddigaha Istaraatiijiyada abuurista malletsyada iyo farsamooyinka hal-abuurka leh ee qabsashada dhulka iyadoo la dhisayo dhismayaasha LEGO ».
“In ka badan 15 sano, LEGO ciyaarta fiidiyowga Dagaaladii Xiddigaha waxay soo bandhigeen aragti gaar ah oo saddax ah Dagaaladii Xiddigaha, oo ka dhigaya taageerayaasha inay ku raaxeystaan ​​adduunka oo dhan, ”ayuu yidhi Douglas Reilly, oo ah madaxweyne ku-xigeenka Ciyaaraha Lucasfilm. “Waan ku faraxsanahay inaan keenno khibrado cusub oo LEGO ah Dagaaladii Xiddigaha dhagaystayaasha taleefanka gacanta ee LEGO Dagaaladii Xiddigaha Dagaallada, oo soo bandhigaya qaabab cusub oo loogu ciyaaro LEGO gaar ah galaxy ka fog, fog.
“LEGO Dagaaladii Xiddigaha Dagaallada ayaa u keenaya dhammaan ficilada iyo soo jiidashada ciyaaraha caadiga ah ee ciyaaraha LEGO dhagaysi caalami ah oo si joogto ah u koraya dhagaystayaasha: ciyaartoy guur guura, ”ayuu yidhi Sean McEvoy, oo ah gudoomiye kuxigeenka ciyaaraha dijitaalka ah ee kooxda LEGO. “Waa ay fududahay in wax la barto oo la ciyaaro, oo waxay ku keentaa madadaalo iyo jahwareer ciyaarta ciyaarta LEGO ee labada ciyaartoy ee cusub iyo kuwa qibrada leh.”
Iyada oo ay ka kooban tahay sagaalka filim ee taraawiixda iyo Star Wars ™: Dagaallada Clone ™ Y Faqradda koowaad: Xiddig Star Wars ™ Sheeko, ciyaartoydu waxay soo ururin karaan halyeeyada halyeeyada ah iyo reer miyi, sida Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett ama Darth Vader, iyo sidoo kale jilayaasha sida xardhooyinka, dabeylaha duufaanka, wadooyinka dagaalka iyo gawaari kala duwan, laga bilaabo AT-AT illaa Qaraxyada TIE iyo xitaa Millennium Falcon. Markii ciyaartoydu ay sii socdaan oo ay kor uqaadaan, waxay furi doonaan meelo kala duwan oo ku saleysan meelaha loo yaqaan Dagaaladii Xiddigaha, sida Scarif, Naboo, Hoth, Endor, Geonosis iyo qaar kaloo badan.
LEGO Dagaaladii Xiddigaha Dagaallada waxay imaan doontaa App Store iyo Google Play sanadka 2020, waxaana bilaash looga heli doonaa iibsashada arjiga gudaheeda.